स्मरण शक्तिका विश्व कीर्तिमानि भन्छन्, शिक्षा प्रणाली बदल्न सक्छु – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
स्मरण शक्तिका विश्व कीर्तिमानि भन्छन्, शिक्षा प्रणाली बदल्न सक्छु
कार्तिक ९ ,वि.सं. २०४६ सालमा झापा भद्रपुरमा जन्मिएका अर्पण शर्मा स्कुल जीवनमा कहिल्यै असफलन नभइ राम्रो अंकका साथ विद्यालय शिक्षा उत्र्तिण भए । उच्च शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने उनी एकदिन कलेज गएर एउटा क्लाससम्म नलिइ कलेज टप गर्न सफल भए । अर्पण अहिले एन.बि.एस. प्रथम वर्षमा मेचि मल्टिपल कलेज झापामा अध्ययनरत छन् । अद्धभूत क्षमता विकाशको लागि घरको वातावरणले पनि साथ दिनुपर्छ । अर्पणको परिवारको वातावरण पनि शान्त थियो । उनलाई उनकी फुपु मिरा कार्कीले पनि त्यसक्रमा निकै सघाएकी थिइन् । सानै उमेरदेखि चिन्तनमनन गर्ने अर्पणको स्वभाव थियो । उनी अरु बच्चाहरु भन्दा पृथक र शान्त स्वभावका थिए ।
अर्पण २३ वर्षको उमेरपछि २ वर्षसम्म ध्यान र योगामा तल्लिन भएर लागेका थिए । उनी त्यतिबेला दैनिक ८ घण्टा योग र बेलुका ३ घण्टा ध्यान गरेर मात्रै सुत्दथे । उनको यस्तो स्वभावले परिवारलाई भने सशंकित पारेको थियो । बाहिरी दुनीयाँसँग त्यति घुलमिल नहुने अर्पणको स्वभावले घरपरिवारमा त्रास फैलिएको थियो । त्यसपछि उनले आफैँ परिवारलाई सम्झाए र चिन्ता नलिन आग्रह गरे । उनै अर्पणले एक मिनेटमा ४२ शब्दका क्रम स्मरण गरी गिनिज बुक अफ दि वल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल भएका हुन् । अद्भूत उपलब्धिपश्चात उनी अहिले निकै व्यस्त छन् । आजभोली विभिन्न मेमोरी पावर सेमिनारहरुमा उनी सहभागि भइरहेका छन् । अर्पणको कुरालाई मान्ने हो भने स्मरण शक्तिका लागि व्यवस्थित खानपान र जीवनशैली महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यार्थीहरुले आफ्नो दिमाग र स्मरणशक्ति तेजीलो बनाउन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुबारे अर्पणले सुझाबहरु दिने गरेका छन् । शैक्षिक अभियानले गरेको कुराकानीका क्रममा उनले दिएका सुझाबहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
1. विद्यार्थीले अध्ययन गर्दा हरेक शब्दलाई चित्रमा ढालेर पढ्नुपर्छ । प्रत्येक कुरालाई फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ ।
2. रटेर पढ्दा कहिले पनि दिमागमा घुस्दैन । जसले गर्दा हरेक शब्दलाई कोडिङ गरेर पढ्नुपर्छ ।
3. बिहान चाँडै उठ्ने नाममा घण्टी वा कुनै आवाजको प्रयोग गर्नु राम्रो होइन । सधैँ निद्रा पुग्ने गरी सुत्नुपर्छ ।
4. निद्रालाई असर पर्ने गरी अध्ययन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । किनभने त्यसरी पढेको सम्झिन सकिदैन ।
5. एक घन्टा पढेपछि २० मिनेट आराम गर्नुपर्छ ।
6. ध्यान र योगाले दिमागलाई तेजिलो बनाउँने हुँदा नियमित बानी बसाल्नुपर्छ ।
7.बदाम, ओखर, पालुंगोको सागले दिमागको स्मरणशक्ति बढाउँछ । त्यसैले दैनिक खानामा यसको प्रयोग बढाउनुपर्दछ ।
8. सकेसम्म रातिभन्दा बिहान पढ्ने बानीको विकास गर्ने । राति अक्सिजन कम हुँदै जाने कारण पढेको सम्झन गाह्रो हुन्छ ।
9. अध्ययन गर्दा मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हुँदैन । यसलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्दछ ।
10. पढ्दा ढाड सीधा राख्ने ।
11.पढ्दा शान्त वातावरणको आवश्यकता पर्दछ । एकान्तमा बसेर पढ्दा सम्झन सजिलो हुने हुँदा सोहि अनुसारको वातावरण ।
अर्पण प्रायः आफू उडेको सपना देख्दछन् । उनी सधैँ आत्मविश्वास उच्च राखेर अघि बढ्दछन् । आफूभित्र रहेको अन्तरनिहित क्षमताको पहिचानले मात्र जीवनमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने उनी गीत गाउनमा पनि रुचि राख्दछन् । बि.बि.ए. दोस्रो वर्षमा अध्ययनको क्रममा साथीहरु मिलेर ग्रुप स्टडि गर्ने क्रममा एउटा खेल खेलियो । जसमा तीसचालीस वटा शब्दको लिस्ट दिएर अगाडिदेखि पछाडिसम्म भन्नुपर्ने थियो । अर्पनले त्यो काम पुरा गरे । उनले केहि समयको अन्तरालमा नै क्रम मिलाएर अगाडिदेखि पछाडिसम्म क्रमशः शब्दहरुलाई जस्ताको तस्तै उच्चारण गरे । त्यतिबेला नै उनको साथीहरुले उनलाई त्यस्तो गरेर विश्व किर्तिमान पनि राख्न सकिने बताए । अर्पण भन्छन्, “तर त्यतिबेला म चाहिँ राख्न सक्दिन भन्ने भयो । साथीहरुले नै कर गरेर हेर्दैमा के फरक पर्छ र भनेपछि नेटमा सर्च गरेर हेरे ।” त्यो हेरिसकेपछि अर्पणले पनि रेकर्ड राख्ने सोच बनाए ।
बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई मेमोरी पावर अर्थात स्मरण शक्ति चाहिन्छ । रोगिलाई औषधि सम्झेर खान पनि स्मरणशक्ति तेजिलो हुनु आवश्यक रहन्छ । जसको लागि केहि कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । कति पढियो भन्दा कसरी पढियो भन्ने कुराले महत्व राख्द छ भन्ने मान्यता राख्ने अर्पन अवसर पाएको अवस्थामा नेपालको शिक्षा पद्धतिलाई बदल्नसक्ने विश्वास राख्दछन् ।।
दिपक मनांगेले किन धम्क्याए ओलीलाई